Kedu otu ị ga - esi manye gọọmentị ịgbanwe mgbe ị na - eleghara ọha mmadụ anya? : Martin Vrijland
Kedu otu ị ga - esi manye gọọmentị ịgbanwe mgbe ị na - eleghara ọha mmadụ anya?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 8 November 2019	• 8 Comments
Anyị ahụla ọtụtụ ngagharị iwe n’izu ndị na-adịbeghị anya ma o doro anya na ọtụtụ ndị ọrụ ugbo, ndị na-ewu ụlọ na ọtụtụ ndị ọzọ na-ewe iwe. Ọ bụrụ na ụdị ihe a emee, ị ga - ahụ na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị mgbasa ozi ga - emebi njikwa. Mmemme telivishọn dịka nke Jeroen Pauw ọkachasị bụ ndị nna na njikwa mmebi a yana ịchịkwa nghọta.
A ga-echebe ndị ọrụ na-elekọta ndị ntorobịa megide ime ihe ike nke ndị nne na nna iwe iwe ka a na-echebe ndị nne na nna iwe ihe ojoo gburugburu igwe na-agbapụta mmiri ebe ọtụtụ mmadụ na-enweta ihe ha ji ebi ndụ, ọ na-abụkarị na-atụleghị ahụhụ nke ya. A ga-echebe ndị agha megide ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị kwenyere na bọmbụ bụ igbu ọchụ. Ọ bụrụ na ndị ọrụ ugbo ewee iwe, ọbụnadị mgbasa ozi nọmba 1 dị njikere ịkọpụta na ọtụtụ ndị bi na Netherlands kwenyere na steeti ahụ adabala n'usoro akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ya. Ọ bụrụ na ihe niile ga - agwụ site na mgbe ahụ ịchọrọ imechi ihi mmiri ahụ. Ọ dị ka ọtụtụ ndị Dutch na-eteta mgbe ọ dabara na obere akpa ha ma ọ bụ ọrụ na-adịghị ize ndụ. Ndi mmadu na-adi ka ihe nke abuo n’oru nke aka ya ma obu oru ya, mana oburu na aka mmadu ma obu nche ya dakwasiri, o kachasi ike inupụ isi.
2019 kachasị, ọ bụ afọ nke otu ndị otu ọkachamara niile na-arụ ọrụ ozugbo ma ọ bụ na-akpaghị aka maka steeti pụtara iyi egwu, wakpo ma ọ bụ gbuo. Ọ bụghị naanị ndị ọka iwu, mana ugbu a ọ bụ ndị na-ahụ maka curators, ndị ọrụ na-elekọta ndị ntorobịa na ndị nta akụkọ ga-enwerịrị nchebe steeti Nke ahụ ọ nwere ike ikwu ihe banyere etu oke ụjọ si na -aga na ọha mmadụ, yabụ na-ata ahụhụ mmadụ na-ata? Ndi oru nta akuko bu ndi ekpuara akuko nke ndi omekome, mana nke a yiri ka ebum n’uche ikwe ka ndi oru okacha amara n’enye ha aka n’iru iweputa akuko ugha ha na-ezighi ezi. Okwenyeghi? N’ezie, n’ezie ọ tọrọ ntọala nke ọma, n’ihi ekele nke akụkọ nke ndị nta akụkọ na ndị njikwa nghọta na afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị nwere onye akaebe na-enweghị aha ma ọ bụ isi iyi na-enweghị aha na n’ụzọ nkịtị, usoro mgbasa ozi na-enyezi ma na-anwale ikpe ọha.
Ọ bụrụ na ihe adịghịzi n’aka, ị hazie mmegide mgbe niile n’ụdị nzukọ ndị otu na nzukọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. I nwere ike icheta etu Wim Kok si bụrụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị sitere n’aka onye isi n’otu azụmahịa. Ndi otu ahia diri ebe ahu ka ha nwee nguzogide n’ime ndi mmadu ka ha ghara itufu ikuku. Otu a na-emetụta ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị isi ha n'ihu. Enwere ike tụọ uto ọ bụla na ọha mmadụ site na sistemụ data buru ibu ma ọ bụ ihe nlele na - enwe ike ime ka redio, TV na ndị agha mgbasa ozi na - elekọta mkparịta ụka ahụ. Ma ọ bụrụ na ọ na-eyi egwu ị ga-eme ihe na-adịghị mma, ị ga-eziga onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na limousine ozi dị ọnụ ya ma yie ọtụtụ igwefoto were were ọnụ mejupụta ndị mmadụ, na-egosi nke a na-akpọ nghọta, mana ozi dị ebe ahụ otu foduru nke "Ọ dị mkpa ma anyị ga-eme ya". Really na-eche n’echiche na Mark Rutte na-echedị gbasara obere akpa gị ma ọ bụ ọdịmma gị? You n’eche n’ezie na ọbụnadị otu onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ otu onye ji ụgwọ ọrụ na-akwụ ụgwọ na tube na-eche maka ọdịmma gị? Ee e.
isi iyi: wikipedia.org
Yabụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ibido ịgbanwe ihe na ọha mmadụ, mgbe ahụ anyị agaghị abụ naanị jidere ụdị egwu a ma ọ bụrụ na ọ dabara na onwe anyị, mana ọ bụ oge iji bido ileru anya ihe na-ezighi ezi. Maka nke a, ị ga - ele anya karịa usoro mgbasa ozi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Lee anya na imi gị. Nke a kachasị emetụta mgbanwe dị mkpa na onwe anyị, otu anyị si ele ụwa anya na otu esi egwu anyị. Ọ bụrụ na anyị amalite ịhụ ụzọ niile eji egwuri egwu na njikwa anyị, anyị nwekwara ike ịgbanwe okwu ahụ na ọkwa dị oke mkpa. Nke ahụ agaghị ekwe omume site na itinye tipp-ex na ihuenyo. Maka nke a, anyị ga-ekwupụta ihe na-akpata otu otu. Anyị ga-eme aghụghọ na aghụghọ akwa niile ịhụ site na mmemme ma gbanahụ aghụghọ na aghụghọ ahụ. N'ụzọ bụ isi, anyị anaghị ekwu maka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị na - ahụ maka mgbasa ozi (dịka Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk, wdg), kamakwa banyere mmegide a na-achịkwa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị ọrụ na ụdị nke ịbanye n'ime ọha mmadụ.
N'akwụkwọ ọhụrụ m a na-atụle usoro aghụghọ niile m na-ejikwa ụzọ edozi nke ọma. Oge eruola ịrụ ọrụ nke ga-amalite n'ezie na ịmalite n'ọrụ ga-amalite site n'ịhụ ihe niile nke mmemme na eziokwu dị ka anyị chere na anyị siri ghọta ya. Really chọrọ n'ezie ire akwụkwọ gị Vrijland? Anọwo m na-ede 7 na weebụsaịtị a n'afọ ofufo na nke ahụ eriwo m oke. Agbanyeghị, enweghị m ike ichikota afọ 7 ndị ahụ dị mma karịa n'akwụkwọ, ọ bụ ya mere m ji were nsogbu ahụ. Short na ruo, ma iko doro anya ma dee ya na ịhụnanya. M tinyere ọtụtụ ume n’ime ya, n’ihi na n’echiche m, ihe kwesịrị ịgbanwe. Oge eruola maka nnukwu mgbanwe ọha na eze na nke ahụ ga - abịa ma ọ bụrụ na anya mepere emepe na ụzọ niile. Emeela m ike m niile. Nọdụ ọdụ ma ọ bụ kwagharị. Participate na-ekere òkè?
Geert Wilders bụ onye nnupụisi a na-achịkwa
Arụmụka n'etiti Mark Rutte na Thierry Baudet na-egosi na ịkwesighi ịme votu
8 November 2019 na 15: 19
Echere m na ngagharị iwe ndị a na-eme ebe ahụ pere mpe.
Olee ihe ngagharị iwe ahụ rụpụtara! Nada. Ọ bụrụ na ị na-eme ngagharị, ị ga-aga n'ihu n'eziokwu ruo mgbe ị nwetasịrị ihe wee bido oji. Ma ọ bụghị ya, ndị ọbịa 'gụrụ akwụkwọ' ga-achịrị gị ọchị ma ha ewerela ngagharị iwe dị ntakịrị na edemede ha na otu ụbọchị nke ngagharị iwe.
8 November 2019 na 16: 06
N'ezie, ọ nwere ike bụrụ na ha nwere pawns na nzukọ ..
8 November 2019 na 16: 34
Nke a bụ eziokwu, ọ bụ otu a ka ọ si arụ ọrụ, mana dịka m kwuru na mbụ, "ọ dabara na anyị bi na" usoro iwu. " Ahụ ụkwara.
Tụlee ọnọdụ dị ugbu a dịka ngwakọta nke ihe nkiri George Orwell na ụwa obi ike ọhụrụ nke Huxley. Nice mix, mmanya, agaghị echefu ya. Cheers Guys na-eji edemede gị.
12 November 2019 na 00: 33
Mgbe m gara hụ ndị mụrụ m, ahụrụ m ihe ndị a na telivishọn:
O were obere oge tupu m ghọta ihe kpatara oke iwe na oke mmụọ (na n'echiche m na-enweghị ọrụ) na nzaghachi nke Renske Leijten. Na njedebe ọ na-ekwu banyere obere ndị 8500 ndị ọ na-ewe iwe n'ihi ya, mana enwere oke iwu na gọọmentị. Ruo na oge nkeji 22: 05 nke ugbu a na-emegharị mantra ugboro ugboro n'ụdị mgbanwe site na onye bịara: "Ma lee ka nke a si bụrụ ihe ọjọọ, nke a bụ n'ezie gọọmentị na-atụgharị megide ụmụ amaala ya". Ihe m na-ekwu bụ na gọọmentị kwesịrị ichebe ụmụ amaala ya ma emeghị nke ahụ.
Ebee ka anyị hụrụ onye ozi dị otú ahụ nke kwupụtara nke ahụ? "Gọọmentị nọ ebe ahụ iji chebe ụmụ amaala ya ma daa nke ọma."
Oge ụfọdụ, ọ na-atọ m ụtọ maka etu esi eji arụ ọrụ ndị a. Ndị mụrụ m nọ n'ọnọdụ "ihere !!". Oge ụfọdụ, m ga - achọ ịkọwara ndị mụrụ m etu esi eme ka uche ha si n'ihe na - eme n'ezie site na ịbanye n'oghere dị obere ma nwee mmetụta uche.
Ka ọ dị ugbu a, akwụsịrị m ịnwale ndị ahụ. Ọ bụrụ na ọgụgụ isi na-eme ka ọdịdị ya pụta (enweta site na nọmba ekwentị 11-11, mara mma, ọnụ ọgụgụ ugboro abụọ, lache!) Enwere m ụjọ na a ga-akpọ m na mbido mbụ ...
12 November 2019 na 00: 44
“Transportgbọ njem kwesịrị ekwesị dị mkpa n'ihi na ndị emeghị mpụ adịghị n'ime ụgbọ ala ndị uwe ojii. Ọzọkwa ụgbọ ihe mberede na-adịghịkarị mkpa na nke a. Site n'iji ụgbọ njem dị mma, a na-ebugharị ndị a ọrụ aka na nchekwa, ọfụma, na-enweghị isi. Enyerela onyinye maka pilot kwesịrị ekwesị nke ZonMW jiri mee ihe otu afọ. N'ime oge a, a ga-enyocha ya ugboro ole ọ ga - eji ụgbọ njem kwesịrị ekwesị. Nakwa otu a si enweta ndị mmadụ na-ebugharị nke a: ndị mmadụ nwere ọgba aghara na ndị ha hụrụ n'anya. ”
Bata na George Orwell ... i putara nke a na iji okwu ohuru?
"E butere ya n'ụzọ dị mma, nke na-enye obi ụtọ, nke na-enweghị isi,
12 November 2019 na 00: 51
Ntụgharị uche bụ nkọwa nke ọrụ ndị gọọmentị nyere ikike iji rụpụta ọrụ kwesịrị ekwesị maka 1 October 2018 n'ihe metụtara ndị mmadụ na-agbagha omume agwa.
12 November 2019 na 01: 13
Mmebi, Amaghị m na ụdị ihe ahụ na-akwọ ụgbọala! Ọ dabara na m bi na ọdịda anyanwụ nke mba ahụ!
Nhota okwu si na edemede a dị elu:
Agbanyeghị, ndị uwe ojii ga na-elebara akparamaagwa anya. Mgbe ahụ onye ọrụ na-anya maka nchekwa nke ndị ọrụ. N'afọ nke abụọ nke ọgụgụ isi na-agba, enwere ike ịhụ ntakịrị mmụba nke iwe. Hendriks kọwara, "Nke ahụ bụkwa maka na anyị na-anya ụgbọ ala karịa, mana ndị uwe ojii makwaara ebe anyị ga-achọta anyị." "Dịkwa ka ọha mmadụ, mmụba na anyị na-aba ụba."
Onye agbataobi m gara aga arụ ọrụ dịka nwanne ambulance n’oge ndụ ya niile. Ajụrụ m ma iwe were ndị ọrụ ụgbọ ihe mberede arịala elu kemgbe afọ. Azịza ya doro anya: “Ee e, ọ dị otu ihe ahụ n'afọ ndị ahụ niile. Ihe dị iche bụ na maka smarthpone na mgbasa ozi mgbasa ozi, a na-amara ndị ọrụ ibe m oge ụfọdụ tupu m alọghachi n'ogige ndị agha. ”
12 November 2019 na 10: 19
Ee, emeela ka ọtụtụ ndị mmadụ gaa na GGZ gulag
" Kedu ihe bụ nsogbu nitrogen, gịnị kpatara ndị ọrụ ugbo ji eme mkpesa na gịnị kpatara mbelata ọsọ?
Nzọụkwụ mbụ bụ akara, nzọụkwụ nke abụọ bụ nwepu: bọtịnụ ịgba ọgwụ mgbochi »
Nleta nile: 13.805.243
SalmonInClick op Mmegide a ha amalitela? Enyerelarị mmụọ ọgụgụ isi na 2018 dabere na ikpe Els Borst / Bart van U.
2 igwefoto op Robert Jensen "Donald Trump ekweghị na New World Order" na-egosi: Jensen.nl bụ ndị mmegide na-achịkwa
SandinG op Robert Jensen "Donald Trump ekweghị na New World Order" na-egosi: Jensen.nl bụ ndị mmegide na-achịkwa
Tụlee op Robert Jensen "Donald Trump ekweghị na New World Order" na-egosi: Jensen.nl bụ ndị mmegide na-achịkwa
Jikọọ ndị 1.682 ndị ọzọ debanyere aha